Naagaha siilka macaan waa kuwa geedkooda qoyo marka... | shumis.net
Home » galmada » Naagaha siilka macaan waa kuwa geedkooda qoyo marka...
Naagaha siilka macaan waa kuwa geedkooda qoyo marka...
Daraasad cusub oo lagu sameyey magalada London ayaa lagu cadeeyey in haweenka inta danbe ubuuran ay leeyihiin Dareeen aad u macaan waqtiga galmada waxaa la xusay in haweenka leh BACK ama Bowdaha waaween misana raaraca ay ay ka dareen badan yihiin kuwa dhuu dhuuban.
marka la tilmaamayo quruxda haweenka ayaa lagu tilmaamaa misana ruux walbo dooqdaa marka aad weydiiiso dooqaagu waa kee kolka aad dumarka mid kala soo baxayso Raga ayaa jwaabtoodu u badatay ,,,, In ay u weyntahay xaga danbe xaga sarana ay u yar yartahay leedahayna boowdooyin aad u buur buuran waa in ay u yar yartahy xaga lugaha jilbaha inta kasii hooseysa ilaa cirbaha .
Waa Cajjiiiiib oo maxay Raggu ku doortaan haweenka sidaaas ah maahan wax aad u weyn oo lala yaabo misana 16 March 2011 ayaa daraaasad la sameyey lagu xusay in Hablaha uweyn xaga danbe ay ka Galmo Kululyihiin kuwa aanan lahyn , Raggu waxa ay keenaan dhidid badan waxa uu yeeshaa awoood aad ufara badan waqtigaas uu ku guda jiro durbaba waa uu miir daboolmaa Sababta o ah dheecaamo saa’id ah ayuu so deynaya Qalabka heblayadas.
Ragga qaar aya ka cabta hababka ay ugu galmoon lahayen xaasaskooda buur buurani, qaarkood waxa ay ku daaleen hal naqshad ama hal qaab ooy hameen iyo maalin kasta ugu galmoodan xaasaskoda Buur buuran Ama cayilan , waxa ay Shabakadani aduun.com ugu soo gudbin doontaa Saacada soo socda Naqshado cusub ood ugu galmoon karto Haweeneydaada Buuuran.
Title: Naagaha siilka macaan waa kuwa geedkooda qoyo marka...
Posted by Unknown, Published at January 26, 2017 and have 0 comments